true investigations /zu-ZA/tools-for-life/investigations/steps/investigation-and-its-use.html read 4 9 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/investigations_zu_ZA.jpg Uphenyo
Ezindaweni lapho umuntu enolwazi oluningi (ulwazi oluhle ngokuthile), uyazi ukuthi isigameko (noma indawo) kufanele sibe kanjani. Isibonelo, uma umuntu esebenze kuhlobo oluthile lomsebenzi iminyaka eminingi, kungenzeka ukuthi yena ujwayelene namathuluzi nemishini engcono kakhulu angayisebenzisa, izindlela ezisebenza kahle kakhulu nezinqubo eziphephe kunazo zonke okufanele azilandele, ukuthi izinto zazisetshenziswa kanjani eminyakeni edlule nendlela izinto ezishintshe ngayo. Yena uzokwazi ukubona ama-outpoints kalula, njengomuntu osebenzisa ithuluzi okungamele alisebenzise. Kepha uma umuntu engazi lutho ngokuthi isigameko kufanele sibe njani, akakwazi ukubona kalula ama-outpoints (idatha engenangqondo) kuyo.
Ukwenza isibonelo, uma singathumela umlimi ohambweni lokuhamba ngomkhumbi, uzoba sendaweni angayazi. Ngokushaywa komoya omncane (okuwukuthi, ngesivinini somoya esingama-miles awu-35 noma ama-kilometer awu-50 ngehora), kusetshenziswa izikebhe nezintambo zazo futhi amagagasi azobe eshaya i-hull (phansi nezinhlangothi zomkhumbi). Ebona futhi ezwa zonke lezi zinto, umlimi ubona ukuthi umkhumbi usuvele ulungele ukucwila. Akajwayele ukuthi kuzwakala kanjani noma kubukeka kanjani, ngakho-ke uphuthelwa ngama-outpoints angempela futhi angahle acabange ukuthi ama-pluspoints angama-outpoints.
Kepha ngosuku oluzolile noluhle umlimi ubona umkhumbi omkhulu kakhulu ungena phakathi kwama-meter amahlanu ohlangothini lomkhumbi wakhe. Umkhumbi omkhulu uqala ukusondela usondele eduze komkhumbi omncane umlimi ucabanga ukuthi konke kuhle.
Isikhulu esinolwazi esikebheni kungenzeka sigijimeze, sizama ukugwema ukushayiswa ngumkhumbi omkhulu futhi umlimi angacabanga ukuthi isikhulu sasingenayo imikhuba emihle! Njengoba umlimi engazi lutho olwandle futhi engenawo umugqa oqondile wokuthi kungaba yiluphi uhambo olusezingeni oluphephile, lokuphepha ngomkhumbi, ubengeke akwazi ukubona ama-outpoints angempela kuze kube eminze. Kepha umatilosi onolwazi ngumuntu owazi konke ngemikhumbi nangokuhamba ngomkhumbi. Yena uyawabona ama-outpoints kwizinto ezincane ezingenayo ingqondo.
Ngakolunye uhlangothi, uma umatilosi ebesepulazini, ubezophuthelwa ukuthi kunesifo esithinta ukolweni (ngakho-ke ukolweni ubungeke ukwazi ukuthengiswa futhi ipulazi belingeke lenze imali evela kukolweni). Wayengaboni ukuthi isango livulekile (ngokwesibonelo, ukuvumela izinkomo noma ezinye izilwane ukuba zizulazule bese zilahleka). Umatilosi wayengeke abone ama-outpoints kuleli pulazi, kodwa umlimi wayezobona lezi zinto ezifanayo futhi azi ngokushesha ukuthi ipulazi lisesimweni esibi kangangokuba ngeke likwazi ukuqhubeka nokusebenza.
UMUNTU KUFANELE ABE NENDAWO EKAHLE YOKUQHATHANISA INDAWO EKHONA.
Uma abasebenzi benganawo umbono wokuthi kwenzekani enhlanganweni yangempela nokuthi isebenza kanjani, kuyaphuthelwa ama-outpoints asobala.
Isibonelo salokhu senzeka lapho isiphathimandla esinamava sivakashela inhlangano sizama ukuthi siveze kubasebenzi abasha ukuthi kuyini (abangenalo ulwazi oluyilo noma olujwayelekile ngenhlangano) okungalungile enhlanganweni. Balungisa lokho athi bakwenze (kuyilapho benza sengathi abafuni ukukwenza), bese beyeka ngomzuzu ahamba ngawo. Njengoba abanakho ukujwayela noma enye indlela enhle yenhlangano ephelele, laba basebenzi abasha ababoni lutho olungalungile noma okulungile!
Imiphumela yalokhu ngokwayo ayinangqondo. Ungabona umphathi ongaqeqeshiwe exosha bonke abantu abakhiqizayo abahle futhi ededela abantu abangamavila noma abangenalusizo ukuthi bahlale. Umqondo wakhe omuhle kungaba yi-organization ethule, ake sithi. Ngakho ke yena uxosha noma ngubani onomsindo noma otshela abanye abantu ukuthi kufanele basebenze. Yena uziba izibalo. Uzishaya indiva izinto okufanele azibukele ngoba nje unendawo engafanele futhi akajwayele ukuthi isigcawu esifanele siqukethe ini.
Lapho isigameko singajwayelekile, umuntu kufanele abuke kanzima ukuze aqaphele izinto. Uqaphelile izivakashi zikwenza lokhu. Kodwa umuntu ohlale lapho isikhathi eside “ubona” okuningi kakhulu kunabavakashi njengoba nje eqonda ngqo ngomgwaqo.
Kulula ukudida iqiniso elingajwayelekile “neqiniso elibalulekile.” “Kwakuwusuku olufudumele ebusika” kungenzeka kube yinto engajwayelekile, kepha iqiniso eliwusizo kuphela uma kuvela ukuthi empeleni yonke into iya-freeze ngalolo suku noma iveze enye i-outpoint.
Amaphutha amaningi ekubukeni enziwa ngoba umuntu akanayo indawo efaneleyo yesehlakalo noma akajwayelene nakho.
Kodwa ke ikhona eminye imithombo yamaphutha.
“Ukuba nengqondo” yisono esikhulu. Ukucabanga kusho ukuthi umuntu uzama kanzima ukwenza imininingwane engenangqondo noma izimo zibonakale zinengqondo azicabangayo, ezivimbayo noma ezimisele ukwamukela izizathu ezingamanga ukuze azichaze. Abantu bacabanga ukuthi okuthile kulungile, njengokucabanga ukuthi okuthile kukhona, ngokwesibonelo, esikhundleni sokubona ukuthi empeleni ilahlekile. I-datum yamanga kucatshangwa ukuthi ikhona ngoba ukulandelana akulungile noma kunesinyathelo esilahlekile.
Isibonelo, kunebhokisi endaweni yemidlalo yaseshashalazini yokubeka ithikithi lakho lapho ungena endaweni yemidlalo yaseshashalazini, kepha umuntu ovame ukuthatha ithikithi kuwe unyamalele. Lokhu kuyaqapheleka futhi abantu bacabanga ukuthi kulungile namuhla kusihlwa ukufaka amathikithi ebhokisini. Kepha kuvele ukuthi obephethe amathikithi ubephuzile futhi umphumela waba ukuthi abanye abantu bavele bangena nje. Abazange bathenge ithikithi futhi bavele bangena kumdlalo waseshashalazini ngaphandle kwalo.
Kuyamangaza ukuthi abantu bamukela kalula kanjani le datha ecatshangiwe kodwa engekho nhlobo. Lokhu kungenxa yokuthi ukulandelana okungenangqondo akukhululeki. Ukuze ukungaphatheki kahle kubekuncane, bashintsha abakuqaphile ngokunganaki i-outpoint futhi baphetha okunye.
Kunemibandela ethile edingekayo yokubhekisisa okunembile.
Okokuqala kuyindlela yokuqonda, ukubuka noma yokuzwa, njll. ngokusebenzisa izinzwa. Lokhu kungenzeka ngokuxhumana kusuka kude (ngokwesibonelo, ngokufunda, ukuzwa noma ukubona okuthile okuthunyelwe kusuka kwenye indawo) noma ngokubheka ngqo, ukuzwa, ukubona.
Okwesibili kuyindlela yokuthi isigameko noma indawo kufanele ibe kanjani.
Okwesithathu ukujwayela ukuthi izigcawu ezinjalo zinjani lapho izinto zihamba kahle noma lapho izinto zingahambi kahle.
Okwesine ukuqonda ama-pluspoints (ukulunga) lapho kukhona.
Okwesihlanu ukwazi ama-outpoints (zonke izinhlobo) lapho zivela.
Okwesithupha yikhono lokuhlaziya idatha ngokushesha.
Okwesikhombisa yikhono lokuhlaziyaisimo.
Okwesishiyagalombili ukuzimisela kokuhlola indawo enama-outpoints amaningi kahle.
Lapho-ke umuntu kufanele abe nolwazi nemcabango okudingeka ukusingathwa.
Umuntu angafonela okungenhla umjikelezo wokubukwa. Uma izingcingo zithinta inombolo eyisishiyagalolunye, kuzoba Umjikelezo Wokulawula. Umjikelezo usho zonke izinyathelo ukusuka ekuqaleni kuze kube sekupheleni kwesenzo.
Uma umuntu eqeqeshelwe ukuqonda wonke umehluko wama-outpoints (illogics) futhi afunde ukuthola ukutholakala okuhle nokuthola ukujwayela endaweni noma uhlobo lwendawo, amandla akhe okubuka nokusingatha izinto angabhekwa njengokuhle kakhulu.